TOHIN’NY FANAFIHANA TENY TANJOMBATO
Tohin’ilay fanafihana sy fitifirana karana teny Tanjombato ny volana jona teo dia miaramila roa miaraka amin’ny namany 4 no nidoboka am-ponja eny Tsiafahy omaly rehefa avy niakatra fitsarana omaly maraina.
Ny 20 jona hoavy izao no fe-potoana farana hahafahana mamerina ireo basy tsy ara-dala eny antanan’olo-tsotra. Aorian’ny 20 jona hiaran’ny sazy enjana ireo izay mbola minia tsy mamerina izany raha ny nambaran’ny minisitry ny Fiarovam-pirenena ny erin’andro lasa teo.
RONGONY 55 KG
Rongony milanja 55 kg no saron’ny pôlisy tany Toamasina ny aliny 6 jona teo. Nafenina tao anaty valizy ireo rongony ireo ary nentina tuctuc. Tsy fantatra ny tena fiavian’ireto rongony ireto raha ny fanazavana.